Home Wararka Gudaha DEG-DEG:-Al-Shabaab oo weerar qaraxyo ku billowday ku qaaday degaan katirsan Gobolka Galgaduud
DEG-DEG:-Al-Shabaab oo weerar qaraxyo ku billowday ku qaaday degaan katirsan Gobolka Galgaduud
Xubno katirsan Ururka Al-Shabaab ayaa waaberigii hore ee saaka waxaa ay weerar ku billaawday qaraxyo ku qaadeen degaanka Baxdo oo katirsan Gobolka Galgaduud, halkaas oo ay ku sugan yihiin Ciidamada xoogaga Ahlusunna & kuwa degaanka ah.
Dagaal u dhaxeeyay Ciidamada degaanka iyo kuwa xoogaga Ahlusunna oo dhinac ah & Al-Shabaab ayaa ka socda degaanka Baxda, waxaana hawada ka maqan Isgarsiinta degaanka.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in dhowr meelood oo katirsan degaanka Baxda uu ka socdo dagaal xoogan, waxaana jira khasaaro aad u farabadan oo ka dhashay dagaalka, balse aan laga heyn faah faahin rasmi ah maadaama isgaarsiinta degaanka ay maqan tahay.
Sidoo kale waxaa ay sheegayaan wararka la helay in Ciidamo katirsan kuwa daraawiishta Galmudug oo gurmad ah ay ka baxeen degaannada kale ee Gobolka si ay uga qeyb qaataan difaacida degaanka Baxda oo ay saaka weerareen Al-Shabaab.
Previous articleMareykanka oo gacanta ku dhigay Sarkaal katirsan Kooxda Daacish
Next articleWarbixin ay soo saartay hay’adda Qaxootiga dunida ee UNHCR
Xog: Mahad Salaad oo amar dul-dhigay ciidan iyo gaadiid ilaalo u...
DAAWO:-“Siyaabo kala duwan ayaa lagu dhisay NISA, balse hoggaanka cusub waan...